China China Factory Cheap Wholesale Lashes OEM OEM Mink Eyelashes Vendor 25mm orinasa sy mpanamboatra | Weiti
China Factory Cheap Wholesale Lashes OEM OEM Mink Eyelashes Vendor 25mm
1, kapoka vita tanana vita amin'ny fanao KRYSTAL
2, volo mink kalitao miharo volo 100%
3, tolotra OEM & ODM natolotra
4, malefaka sy mahazo aina ampiharina
1,Ny kapoka kalocils dia vita amin'ny mink fambolena, nafarana avy any Siberia nandritra ny vanim-potoana molt isan-taona. Aorian'ny fitsaboana hafanana ambony, azo antoka ary asepis. Tsy misy habibiana 100%. Feno sy maivana toy ny rivotra, voajanahary ary mamiratra.
2,Halava 25mm. Volomaso somary miolikolika misy vokany mirehitra mba hahalasa ny masonao. Ampitomboy koa ny halavany sy ny volanao, ka ampio ny halalin'ny masonao. Malemy paika, maivana, mora manampy ny tantara an-tsehatra tonga lafatra amin'ny fijerinao sahisahy. Akanjo filokana mampiaraka, alin'ny zazavavy ary fety sns.
3,Ny volomaso mink 3D rehetra avy any Kalocils dia vita tanana ary tsy araraka. Ny tarika dia vita amin'ny landihazo amoron-dranomasina, hypoallergenic ary malefaka be. Tsy hahatsapa ho mangidihidy be ianao. Mora ny miondrika mba hifanaraka amin'ny hodi-masonao, na dia ny zoro anatiny aza.
4,Ny kapoka mink 3D-tsika dia azo ampiasaina hatramin'ny in-20 miaraka amin'ny fikarakarana sahaza. Mora entina ary mora esorina. Ny faharetany sy ny kalitaony dia hahatonga anao hahatsapa ho mahazo ny volanao. Tsy mora ny mianjera miaraka amin'ilay tadim-bava maharitra.
Teo aloha: China Eyelash Factory OEM ODM Wholesale Cruelty Free 25mm Mink Falhes Lashes
Manaraka: Hot Sale 3D Mink Eyelashes Wholesale 100% Real Siberian Mink Lashes
Volomaso Mink namboarina
Mink Eyelashes mpivarotra 25mm
Lafo mora vidy mora Label Strip tsy miankina amin'ny volony 25m ...
Namboarina manokana 5d 100% Mink Lashes Strip 25mm Long ...
China Eyelash Factory OEM ODM Wholesale Cruelty ...
Customized Private Label Boxes Wholesale Fluffy ...
Volomaso maso, kapoka mink, eyeliner, lipgloss, Fanitarana volomaso, Mpivarotra volomaso,